सेनाले खोल्यो कालापानी जाने घोरेटो बाटोको ट्र्याक:: Naya Nepal
दार्चुला – नेपाली सेनाले व्यासको घाँटीबगर इलाकामा कडा चट्टान रहेको भिरमा घोरेटो बाटोको ट्र्याक खुलाएको छ ।
चार महिना बढी समय लगाएर सेनाले अप्ठ्यारो ठाउँमा बाटोको ट्र्याक खुलाएको हो । मौसम प्रतिकूल नहुनु, कडा चट्टानी भूगोल र सामान ढुवानीमै समय लागेका कारण ट्र्याक खुलाउने काम ढिलाइ भएको नेपाली सेनाका प्रवक्ता एवं सहायकरथी सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताउनुभयो । ‘भिर फुटाएर ट्र्याक खुलाइएको छ’, उहाँले भन्नुभयो,’सफाइ गर्ने काम एक दुई दिनभित्र सकिन्छ।’
घोरेटो बाटो खुलाएको सेनाले लगत्तै सडक निर्माणको काम पनि थालनी गर्नेगरी तयारी भइरहेको नेपाली सेनाका प्रवक्ता पौडेलले बताउनुभयो । सेनाले दुई ठाउँमा क्याम्प राखेर सडक निर्माणको थालनी गर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो,’अहिले परामर्शदातामार्फत अध्ययन भइरहेको छ ।’ यस सडकखण्ड निर्माणको जिम्मा पाएको सेनाले विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) को काम सुरु गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा धार्मिक पर्यटनको निकै सम्भावना छ । कैलाश पर्वत दर्शन, चीन सँगको व्यापार, अपिहिमाल लगायतका थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्र यस क्षेत्रमा पर्छन् ।’ अहिले बाटो नहुँदा छांगरु र तिंकरका बासिन्दा सदरमुकाम खलंगा आउन पाएका छैनन्, सदरमुकाममा रहेका त्यहाँका मानिस पनि गाउँ फर्किन पाएका छैनन्, चाँडो बाटो निर्माण भयो भने स्थानीयवासीलाई आफ्नै भूमि भएर गाउँ जान सहज हुन्छ’, व्यास–१ का बासिन्दा जगदीशप्रताप ऐतवालले भन्नुभयो ।
कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्ता लगाउन गरिने आरटी–पिसिआर परीक्षणका लागि काठमाडौंको स्टार अस्पतालले सरकारले तोकेकोभन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क लिइरहेको पाइएको छ । सरकारले शुल्क घटाएयताको १३ दिनमा मात्रै स्टारले एक करोड २८ लाखभन्दा बढी शुल्क असुल गरेको छ ।
सरकारले २८ भदौमा पिसिआर परीक्षणको शुल्क चार हजार पाँच सयबाट घटाएर दुई हजार कायम गरेको छ । कुनै पनि अस्पतालले योभन्दा बढी शुल्क लिन नपाउने निर्णय गरेको थियो । तर, स्टार अस्पतालले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा सरकारले तोकेकोभन्दा झन्डै दोब्बर शुल्क असुलेको पाइएको छ । स्टारले प्रतिनमुना तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ लिएको बिल नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ । यो सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी हो ।
प्रयोगशाला विज्ञहरूका अनुसार सरकारले तोकेको शुल्कमा पनि फाइदा हुने गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आनुवंशिक वैज्ञानिक डा. गिरिराज त्रिपाठीले पनि धेरै परीक्षण गर्दा सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा पनि प्रतिनमुना पाँच सय रुपैयाँ फाइदा हुने बताए । पिसिआर परीक्षणका लागि पूर्ण रूपमा ल्याब तयार हुन ५० देखि ६० लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताउँदै डा. त्रिपाठीले भने, ‘ठूलो खर्च भएको हुँदा दैनिक न्यून मात्रामा पिसिआर परीक्षण हुँदा निजी प्रयोगशालाले दुई हजारमा गर्न सक्दैनन् । तर, सयभन्दा बढी परीक्षण भएमा सरकारले तोकेको शुल्कमा पाँच सय फाइदा हुन्छ ।’ डा. त्रिपाठीका अनुसार धेरै नमुना भएमा प्रतिनमुना एक हजार पाँच सयमा पनि परीक्षण गर्न सकिन्छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार स्टार अस्पतालले प्रत्येक दिन चार सयभन्दा बढी नमुना परीक्षण गरिरहेको छ । यो १३ दिनमा सरकारले तोकेकै शुल्क परीक्षण गर्दा पनि स्टार अस्पताललाई प्रतिनमुना पाँच सयका दरले ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँ फाइदा हुने प्रयोगशाला विज्ञहरू बताउँछन् । तर, स्टार अस्पतालले सरकारले तोकेभन्दा एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी शुल्क लिएर परीक्षण गरिरहेको छ । प्रतिनमुना एक हजार आठ सय ९९ रुपैयाँ बढी लिएर ६ हजार सात सय ८० जनाबाट १३ दिनमा एक करोड २८ लाख ७५ हजार दुई सय २० रुपैयाँ असुलेको छ ।
पछिल्लो २४ घन्टामा मात्रै स्टार अस्पतालमा सात सय २१ वटा नमुना परीक्षण गरिएको छ । जसबाट एकैदिनमा सरकारले तोकेभन्दा १३ लाख ६९ हजार एक सय ७९ रुपैयाँ बढी उठाएको छ ।
स्टार हस्पिटल कोभिड–१९ प्रयोगशालाका टिम लिडर गोविन्द अकेला सरकारले तोकेको दुई हजार शुल्कमा परीक्षण गर्न नसकिने बताउँछन् । ‘हामीले ५५ सयबाट ४५ सयमा पनि झार्‍यौँ, तर अब दुई हजारमा पिसिआर गर्न सकिँदैन,’ अकेलाले भने । अरू अस्पतालले पनि तीन हजार आठ सय ९९ रुपैयाँमै पिसिआर परीक्षण गरिरहेको उनको भनाइ छ ।
अहिले देशभर ४० सरकारी र १५ निजी कोभिड प्रयोगशाला सञ्चालनमा छन् । निजी १५ वटामध्ये दुईवटा प्रयोगशाला काठमाडौं मेडिकल कलेज र बिध ल्याब कुपन्डोलले सरकारले तोकेभन्दा एक रुपैयाँ सस्तोमा पिसिआर परीक्षण गरिरहेका छन् । अन्य प्रयोगशालाले भने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै संरक्षणमा बढी शुल्क लिइरहेको जनाएका छन् ।
तर, स्टार अस्पतालका कोभिड–१९ प्रयोगशालाका टिम लिडर अकेला स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर शुल्क बताइने बताउँछन् । तीन हजार पाँच सय रुपैयाँसम्म सहमति गरिने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निजी प्रयोगशालाहरूले स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई शुल्क बढाउन दबाब दिइरहेका छन् ।
राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिएको पाइएमा प्रयोगशाला बन्द गर्ने जनाएको छ । पटक–पटक गरेको अनुरोध अटेर गरेपछि प्रयोगशालाले अन्तिमपटक भन्दै शुक्रबार एक सूचना जारी गरेको छ । शनिबारदेखि दुई हजारभन्दा बढी शुल्क लिने प्रयोगशालाको सेवा बन्द गरिने राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला निर्देशक डा. रुणा झाले बताइन् ।